Qalabka Dheeraadka ah ee Tamarta Ku-Salaysan (Smart Energy Smart Thermostats)
Biyaha kulul iyo maaraynta kuleyliyaha miyuu dhab ahaantii ku darayaa kharashka biilka tamartaada?
Cilmi-baadhis, Hay'adda Ilaalinta Deegaanka ee Mareykanka ku salaysan, ayaa muujisay in tani ay tahay kiis marka qoysasku si qalad ah u barnaamijka u dejiyaan ama si buuxda u leexiyaan.
Jawaabtani waxay noqon kartaa saacadahan, saacadaha la isticmaali karo waa:
mid ka mid ah oo wax ka baran kara marka gurigaaga uu madhan yahay ama uu shaqeynayo oo biyo kulul kulul kuugu soo jiidan karo adiga iyo
mid ka mid ah oo kaliya oo fudud oo baraneysa barnaamijka ka badan kuwa xakameysan ee caadiga ah, iyada oo loo marayo casrigaaga aaminka ah
Happy Energy waxay bixisaa laba qalab oo kale ah si aad u bedesho jadwalka / saacadaha barmaamijka ah, kaas oo noloshaada u sahlaya isla markaana keydiya lacagta lacagahaaga tamarta.
Nest Learning Temperature
The Nest Learning Temperature barnaamijyada laftiisa iyo si toos ah ayaa kaa caawinaya inaad kaydsato tamarta markaad maqan tahay. Adiguna waad xakameyn kartaa adiga oo isticmaalaya taleefanka, kiniiniga ama laptop.
Ku rajo geliyay kuleylinta gurigaaga inay sahlan tahay barnaamijka? Ku kalsoonaatay kantaroolka in ay u fududahay in loo isticmaalo casrigaaga? miGenie wuxuu rabi doonaa inuu rabo inuu yimaado.
Xakamee kuleylka kuleylka iyo biyaha kulul meel kasta oo aad joogto, mar kasta oo aad jeceshahay.
Xalku wuxuu noqon karaa bedel toos ah adiga kuleyliyaha kuleylka ah iyo kumbuyuutarka kulul, wuxuu qaadaa saacadaha saacadaha 2 si uu u haboonaado.
Ma jiro caro, buuq la'aan, si fudud oo loo maareeyo kuleylka iyo biyaha kulul.